စက်တင်ဘာထာဝရ: တနေ့တခြား ပို၍ကျယ်လာသော ပြည်သူ့အသံများ
(14th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မတရားဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာထက်စာရင် သူတို့ကို အပြစ်ပေးထားတဲ့ ပုဒ်မတွေဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်က မတရားအပြစ်ပေးခံထားရတာပါ ဆိုတာကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာရှိတဲ့ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ နိူင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းကသိအောင် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် တရားရုံးတွေက ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး မတရားဖမ်းဆီးခဲ့သူတွေကို ပြန်လည်တရားစွဲဆိုဖို့ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ မတရားဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ မိသားစုတွေကို ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကြရင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ခင်ဗျားတို့ကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုနေခဲ့ကြသူတွေကို ခွင့်လွှတ် သဘောထား ကြီးသယောင်နဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီး...
ပြည်တွင်းမှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေရတဲ့သူတွေကိုကျ ဘာ့ကြောင့်များ လွတ်ငြိမ်းခွင့် မပေးသေးတာလဲ???
သူတို့ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ အာဏာရှင်စနစ်လေ.. ခုထိ ခင်ဗျားတို့က သူတို့ကို မလွှတ်ပေးဘူးဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့သည်လည်း အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက် ကျင့်သုံးနေတဲ့ အာဏာရှင်တွေပဲ...
ဟုတ်တယ်..ခင်ဗျားတို့ဟာ သွေးကြောင်နေတဲ့ အာဏာရှင်တွေပဲ...
သမ္မတ သိန်းစိန်လို. ဘဲခေါ်တော်.မယ်နော်...ဘာလို.လဲဆိုတော..ကိုမင်းကိုနိုင်နျင်.အကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်စေချင်လို. သမ္မတ လို.ထည်.ခေါ်လိုက်တာပါ..မခေါ်ချင်ပါဘူး...ဘာလို.လဲဆိုတော.သမ္မတ လို.ခေါ်ရလောက်နိုင်တဲ. အရည်အချင်းမရှိလို.ပါ...တကယ်တော.ကမ္ဘာမှာရှိတဲ.သမ္မတွေဝန်ကြီးတွေက စကားကို အမျိုးမျိုးမပြောပါဘူး..စကားကိုတစ်ခွန်းထဲဘဲပြောပါတယ်..လုပ်ရင်လုပ်မယ် မလုပ်ရင်မလုပ်ဘူး..ပွင်.ပွင်.လင်းလင်းဘဲ..ဘဲပြောပါတယ်..ကလိမ်ကကျစ်စကားကိုမပြောပါဘူး..အခုခင်ဗျားက ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.အကျဉ်းသားတွေကို လဲ ဟိုနေ.လွှတ်မယ် ဒီနေ.လွှတ်မယ် နဲ..ဘာကိုယုံရမှာလဲ..နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဆိုတာ ပြောပြီးရင် စကားကိုတည်ရတယ်...ခင်ဗျားသိအောင်ပြောမယ် နိုင်ငံတော် သမ္မတ တို. ၀န်ကြီးတွေက ဘယ်တော.မှနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းမခိုးဘူး..အပြစ်မရှိဘဲနဲ..မတရားမလုပ်ဘူး..အခုခင်ဗျားလုပ်နေတာတွေက နိုင်ငံတော် ပစ္စည်းခိုးတယ်...ရဟန်းသံဃာတွေကို သတ်တယ် ထောင်ထဲထည်.တယ်..နောက်ပြီးကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.အကျဉ်းသားတွေကို..အပြစ်မရှိဘဲနဲ. အပြစ်ရှာပြီး ပြစ်မူးကျူးလွန်လို.ထောင်ထည်.ထည်.ထားပါတယ်ဆိုတော..ကလိမ်ကကျစ်စကားကို သုံးလိုက်တယ်...လိမ်မယ် ညာမယ် ဆင်ခြေ ပေးမယ်ဆိုရင်လဲ သက်သေအထောက်ခိုင်းလုံအောင်ပြပြီးမှ..လိမ်ရတယ်..ညာရတယ်..အခုခင်ဗျားပေးတဲ. ဆင်ခြေတွေ လိမ်ညာမူတွေက မခိုင်လုံသေးဘူး...ဒီတော. လိမ်ညာမူတွေကို အခုဘဲ ရပ်လိုက်ပါတော..ကိုမင်းကိုနိုင်နျင်.အကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါတော...အာဏာရူး သိန်းစိန်ရေ.....
ကဲ...ပြောကုန်ကြပြီ ကသိန်းစိန် နင်ဘယ်လိုတုံး...
လေးဖြူသီချင်းလို ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေလို့ မရတော့ဘူး...
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ရှိရှိသမျှ မတရားအဖမ်းခံခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးပြန်လွှတ်တော့။
မုန်တိုင်းစဲပြီလား..... မုန်တိုင်းစဲရင်တော့ ပန်းချီကားတချပ်ပမာပေါ့ ကမ္ဘာ သစ်ဆောက်တည်ကာ ပျော်ပါးကြမှာပဲ....လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့တကွ ၈၈ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဦးဂမ်ဘီရနဲ့ သံဃာအာဇာနည်တွေ လွတ်လာပါစေ....လွတ်လာရင် မုန်တိုင်းစဲတော့မယ်လို့ ယုံပြီ
နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်ရင် လွှတ်ပေးမယ်ဆို ပြောသွားသောဦးရွှေမန်းနဲ့ အုပ်ချုပ်တူများ ထောင်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
Free Min Ko Naing N All Right Now!!! ရုရှား နိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲ မဲမသမာမှုတွေ ကို ဆန္ဒပြတဲ့ သတင်း ပြီးခဲ့ တဲ့၂ရက်လောက်က ဖတ်လိုက်ရတယ် ၊ရုရှားမှာ အဲလောက်ဆန္ဒပြနေပေမဲ့ကျနော်တို့ နိုင်ငံက မဲမသမာမှုနဲ့တက်လာပြီး သမ္မတ ဖြစ်နေတဲ့စစ်ယူနီဖောင်းချွတ် သိန်းစိန် တို့ ကတော့ ဗြောင်လိမ် ရင်းနဲ့ ဘဲ တကယ် သမ္မတ တစ်ယောက်လို အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာကပါ အရေးပေးဆက်ဆံနေရပြီ အဲဒါဟာ မဲလိမ် မဲခိုး သိပေမဲ့ကျနော်တို့ နိုင်ငံက အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေ ရုရှားပြည်သူတွေလို တာဝန်မကြေခဲ့ လို့ ဘဲဖြစ်တယ်.။
မင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး..အမြန်ဆုံး လွတ်ပေးပါ~~~~
Free 88 student leader Min Ko Naing and Free Burma's political prisoners Now!
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့်နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ…….
တရားဝင် ဧရာမအတိုက်ခံပါတီ NLD ကိုတောင် တီးဝိုင်းပါမစ် မထုက်ပေးတဲ့ အစိုးရ။ ဒီလိုအစိုးရကို NLD ပြောင်းလွဲလိုက်မယ် ဆိုတာကို ကြောင်ကိုချုဆွဲပေးမယ်လို့ ကြွတ်ဟုသာ ထင်မိပါသည်။ ဒီတော့ ညီအကိုမောင်နှမတို့ရေ ထောင်အတွင်းက ကိုမင်းကိုနီုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ပိုမိုကြိုးစား ရတော့မယ်........
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တောင်းဆိုနေတာက မွေးရာပါ အခြေခံလူ့ အခွင့်အရေး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆိုတာ အဲ့ဒိ တောင်းဆိုမှု့ အတွက် ရှေတန်းက ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ လူတွေ။ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သူက အာဏာရှင်။ ပြန်လွှတ်ပေးတာက ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ။
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွတ်
ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုပါက မနက်ဖြန်မနက် ၈း၀၀
Myat Thi Ha
အကို ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် အတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
08:16 am <14,dec,2011>Thailand.
thailand 9:44 am 14 december 2011
စစ်အာဏာရှင် လက်ထက်က မတရားအကျဉ်းကျခံနေကြရသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါရန် ဒီနေရာက တောင်းဆိုပါသည်။
မိုးတရက်လင်းပြန်ပေါ့ "ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံး"ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးတဲ့ သတင်းတွေonline ပေါ်မှာဖတ်ရရင်ကောင်းမယ်ဗျာ.. သူတို့တွေကိုငါတို့ပြည်သူတွေလိုအပ်တယ်အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ..
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပါ။
နှစ်ကုန်တော့မယ်။ သင်တို့ယုတ်မာမှုတွေ မကုန်နိုင်သေးဘူးလား။
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ (2011.DEC.14) 3:41pm Japan Standard Time.
သင်တို.၏လက်သီးဆုတ်များကိုဖြေလျှော.ပေးသော်ကျွန်ုပ်တို.ကလည်းလက်လှမ်း လာပါမည်....ဟုအမေရိကန်သမ္မတကြီးမှပြောကြားခဲ.ပါသည်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင်. နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု့များကိုလုပ်ဆောင်ပါကနိုင်ငံတကာ၏စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများကိုလည်းကျွဲကူးေ၇ပါဆိုသလိုရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ဥိးစားပေးဆောင်ရွက် ရန်အချက်တို.မှာထာဝရပြည်တွင်းငြိမ်ချမ်းရေးနှင်.ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားအားလုံးချက်ခြင်းလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင် အစ်ကိုတို့ စတင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို တောင်းဆိုဖို့စောင့်နေတယ် ညီတို့စောင့်နေတယ် အစ်ကိုတို့နဲ့လက်တွဲပီး သမိုင်းမော်ကွန်းထိုးမဲ့ကျောင်းသားမဂ္ဂကို ပြန်တည်ဆောက်ကျမယ်
ဒီမှာ.. သမ္မတကြီးနဲ့ ဖွတ်တော် ဥက္ကဌကြီး.. ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ မကြာမှီလွှတ်မည်.. မျှော်... ဆိုတာကြီးကို မျှော်လင့်ရင်း မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ လူစင်စစ်က ဗျိုင်းတွေ ဖြစ်ကြတော့မယ်..။
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့တကွ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးကြဗျာ..
ရေးသူ Ma Nandar အချိန် 7:31 AM